အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူများ အိမ်ထောင်ရှိသည့်သူများ ဖတ်ရန်အတွက်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူများ အိမ်ထောင်ရှိသည့်သူများ ဖတ်ရန်အတွက်။
အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူများ အိမ်ထောင်ရှိသည့်သူများ ဖတ်ရန်အတွက်။
Posted by ခင်ခ on Oct 30, 2012 in Creative Writing, Society & Lifestyle | 41 comments
ကိုယ်ကျင့်သီလဟာ အသက်ရှင်နေခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ ပါးစပ် ဖျားမှာ ရေပန်းစား နေတဲ့ အူမတောင့်မှသီလစောင့်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကျွန်တော်နားယဉ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သောက်စရာရေမရှိ လို့ မိုးခါးရေသောက်ကြရသလို အသက်အသေခံ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီး သီလမစောင့် နိုင်ကြ တာကို လောကီအမြင်နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ အပြစ်မဆိုသာဘူးပေါ့။
အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် လူ့ကျင့်ဝတ်တွေအကုန်လုံးကို မစောင့်ထိန်းနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုရင် တတ်နိုင်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို ကြိုးစားပြီးစောင့်ထိန်းသင့်ပါတယ်။ တစ်ပါးသီလလောက် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ တစ်ပါးသီလ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မြန်မာ့ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မကြာခဏ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကို နားထောင်ဖူး၊ ကြည့်ဖူးတဲ့သူ တွေ ရှိမှာပါ။ မသိလိုက်တဲ့သူတွေအတွက် မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဇာတ်တော်တခုခုကို အခြေခံထားတာလားတော့ သေချာမသိပါဘူး။ ဘဘဦးသုခ ရိုက်ကူးခဲ့တာလို့တော့ သိရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုပါ။ ရဟန်းတော်တပါးက သူခိုးတယောက်ကို ငါးပါးသီလလုံဖို့ အရေးကြီး ကြောင်းဆုံးမတော့ သူခိုးက အမျိုးမျိုး လျှောက်လွဲချက်တွေပေး ပါတယ်။ သူခိုးတယောက်အနေနဲ့ ရရာခိုး စားနေရတဲ့အတွက် သူ့အသက် သတ်ခြင်းကို ရှောင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို၊ အမြဲတမ်းလိမ်ညာ ပြောဆိုရမှာဖြစ် လို့ သီလစောင့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လျှောက်ပါတယ်။ ရဟန်းတော်ကလည်း အလျှော့မပေးပဲ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ သိက္ခာပုဒ်ဖြစ်တဲ့ သူတပါးအိမ်သူ (အိမ်သား)နဲ့ ကျူးလွန်ခြင်း၊ မိမိအ်ိမ်သူ(အိမ်သား)မှတပါး သူတပါးဇနီးမယား သမီးပျိုများကိုကျူးလွန်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါဧ။် ဆိုတဲ့သီလတစ်ပါးကိုတော့ သူခိုးလည်း စောင့်ထိန်းလို့ ရနိုင်ပါကြောင်းတိုက်တွန်း ဆုံးမပါတယ်။ ရဟန်းတော်ကို ရိုသေရှာတဲ့သူခိုးလည်း သေသေ ချာချာစဉ်းစားပြီး၊ ဒီတစ်ပါးသီလကိုတော့ ရာသက်ပန်စောင့် ထိန်းပါမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကတိပေးတော့ ရဟန်းတော်က သာဓုခေါ်တော်မူပြီး၊တစ်ပါးသော သီလကို အသက်ထက်ပိုပြီး ကာကွယ်စောင့်ထိန်းဖို့ သတိပေးဆုံးမလိုက် ပါတယ်။
တနေ့မှာတော့ တစ်ပါးသီလယူထားတဲ့သူခိုးဟာ သူဌေးအိမ်ကပစ္စည်းခိုးဖို့ အမှောင်ရိပ်ခိုပြီး လစ်တဲ့အချိန်ကို ချောင်းနေပါတယ်။ သူခိုးက ရုပ်ဖြောင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ သူခိုးလှုပ်ရှားနေတာတွေ၊ အလစ်ချောင်းနေ တာတွေ ကို မြင်လိုက်တဲ့သူဌေးကတော်က သူခိုးကို သဘောကျသွားပါတယ်။ ကာမအလိုပြည့်ဖို့ကိုပဲ စဉ်းစားတဲ့ သူဌေး ကတော်ဟာ အလစ်ချောင်းနေတဲ့ သူခိုးနားကိုသွားပြီး သူမနဲ့အတူ ပျော်ပါးဖို့ပြောပါ တယ်။ သူမမှာပစ္စည်း ဥစ္စာ တွေ များစွာရှိတဲ့အတွက် နောင်ကိုခိုးယူစားသောက်ဖို့ မလိုတော့ကြောင်း သွေး ဆောင်ဖျားယောင်း ပါတယ်။ သူခိုးက သူစောင့်ထားတဲ့ သီလကိုအပျက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် သူဌေးကတော် ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပါတယ်။ ဒီလို သူဌေးကတော်က သူမအလိုပြည့်ဖို့ အဓမ္မ စည်းရုံး၊ သူခိုးက အတင်းငြင်းဆန်နေတဲ့အချိန် သူဌေးကြီး ရောက်လာပါတယ်။ မာယာများတဲ့ သူဌေးကတော်က သူမကို သူခိုးက အဓမ္မ ကျင့်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ သူဌေးကြီးကိုပြောပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို သိလိုက် တဲ့သူဌေးကြီးဟာ သီလပျက်သစ္စာမဲ့တဲ့ ဇနီးကို နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်းပီသစွာ စောင့် ထိန်းအပ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ရဲရဲရင့်ရင့် စောင့်စည်းလိုက်တဲ့ သူခိုးကိုတော့ သူဌေးကမွေးစားလိုက် ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းမှာ အဓိကပြောချင်တာက သီလစောင့်တဲ့အတွက် သူခိုးဘ၀ကနေ သူဌေးဘ၀ရောက်ရတာ အားကျအတုယူစရာကောင်းတယ် ဆိုတာပါ။ ဒါမျိုးက ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပဲရှိတာလို့တော့ မယူဆစေချင်ဘူး။ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့ သူခိုးတောင်စောင့်နိုင်တဲ့ သီလမျိုးကို အမျိုးကောင်းသား အမျိုးသမီးကောင်းတွေလည်း စောင့်ထိန်း သင့်တယ်လို့ တွေးဆဆင်ခြင်စေချင် ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတဲ့ အချိန်လောက်ရောက်တော့ ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့လူချမ်း သာအသိုင်း အ၀ိုင်း မှာပါ အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တာတွေ များလာတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ တချို့ဘွဲ့ရမိန်း ကလေးတွေ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရပ်တည်လို့ ရတဲ့အခြေအနေရှိရဲ့နဲ့ သူမျာ့း မိသားစုနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကိုပျက်စီးစေပြီး၊ ကိုယ်တိုင်အငယ်အနှောင်း ဖြစ်ရတဲ့ဘ၀ကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ကြမှန်း နားမလည်ခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ ဆရာမကြီး တစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။ လောကဓံ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကို မခံချင်ကြတော့ ခူးပြီးသားခပ်ပြီးသား အဆင်သင့်ကို ရွေးချယ်ကြတာပေါ့တဲ့။ အဲဒီလိုပြောမှပဲ သဘောပေါက် သွားပါတယ်။ ခေတ်အခြေအနေ အရ တန်းတူရွယ်တူ ယောက်ျားတစ် ယောက်ကိုလက်တွဲရင် နှစ်ယောက်အတူ ပင်ပင်ပန်းပန်းရုန်းကန် ရမှာမို့ လွယ် တဲ့လမ်းကို ရွေးကြတယ်ထင်ပါရဲ့။
အမျိုးသားများဖေါက်ပြန်ကြတာကတော့ ၂၀ရာစုမှာကတည်းက ဖက်ရှင်ဖြစ်နေပါတယ်။ တချို့ယောက်ျား များကတော့ သူတို့ဖေါက်ပြန်ရ တာမိန်းမတွေကြောင့်လို့ဆို ပါတယ်။ ဟုတ်ရင်လည်း ဟုတ်မှာပါပဲ။ မိန်းမတွေ ဖြားယောင်းလို့တစ်ချို့ခပ်အေးအေးယောက်ျားတွေ ဖေါက်ပြန်သွားကြတယ်။ တစ်ချို့ကြတော့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေလို့တဲ့။ ရိုးအပြီးဘာမှနားမလည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုကျတော့ ကျမ်းကြေတဲ့ယောက်ျားများက နင်းချေလိုက်ကြတယ်။ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုကျတော့ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားများက တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ပေးပြီး ချေတော်တင်လိုက်ကြတယ်။ ၂၁ရာစုမှာထပ်တိုးလာတဲ့ မယ်တစ်ရွာမောင်တစ်ပြည်ဆိုတဲ့ ဖက်ရှင်ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်မှုတွေ ဟာ ထမင်းစားရေသောက်ကိစ္စလို ဖြစ်လာပါတယ်။ သူများတွေလည်း ဒီလမ်းသွားနေကြတာပဲဆိုပြီး လျှောက်လိုက် သွားကြမှာလား။ ဒီလိုဆို လူ့လောကအတွက် စည်းကမ်းဘောင်တွေ ရှိနေဖို့ မလိုတော့ဘူး လား။
ယဉ်ကျေးခဲ့ကြသောမြန်မာတွေ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပရမ်းပတာလူမျိုး ဖြစ်မသွားအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ တော့လို နေပါပြီ။ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ထပ်တူမကျနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ သတ္တိတွေ၊ ခိုင်မာ တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို လေ့ကျင့်မွေးမြူ ကြရပါမယ်။ တဒင်္ဂခဏ သာယာမှုအတွက် စိတ် အလိုလိုက်ရင် နောက် ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်လာသလဲ။ တာဝန်မဲ့စွာ ပျော်ပါးကြတဲ့ ယောက်ျားများကြောင့် မိန်းကလေးတွေ မိခင်စိတ် ကင်းမဲ့လာကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သွေးကဖြစ်တဲ့ ရင်သွေးတွေကို လူ့လောကထဲ ပေးမ၀င်ကြတော့ဘူး။ မတော်တဆ လူ့လောကထဲရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေဟာလည်း ရင်ခွင်မဲ့ဘ၀၊ စွန့်ပစ်ခံဘ၀နဲ့ ၀ဠ်ကြွေးတွေပေးဆပ်ဖို့ လူ လာဖြစ်သလို ဖြစ်နေကြရတယ်။ ကိုယ်သာ ဒီကလေးနေရာမှာဆို လောကကြီးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင် မလဲဆို တာလေး တွေးမိစေချင်ပါတယ်။ နောက်အကျိုးဆက်တခုကတော့ လူတိုင်းသိကြတဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါပါ။ ဒီလိုအကျိူးဆက်တွေကို ခံနေရတဲ့ရောဂါသည်တွေ မိဘမဲ့ ကလေးတွေအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ လည်း ၀န်တွေပိနေကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်တွေလည်း မရေတွက် နိုင်အောင် ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ အခြားသတ္တ၀ါတွေထက် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတော့ ရေရှည်ကိုတွေးခေါ် မြော်မြင်နိုင်ပြီး၊ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေနဲ့ ကမ္ဘာလောကကို စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးများ မိမိတို့ရဲ့ ဣနြေ္ဒသိက္ခာကို စိန်ရွှေရတနာနဲ့ မလဲနိုင်လောက်အောင် တန်ဖိုးထားတတ်စေချင် ပါတယ်။ ရှိတာလေး နဲ့ လှအောင်ဝတ်၊ ရတာလေးနဲ့လောက်အောင် စားတတ်ပြီး၊ ပကာသနဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ ယှဉ် ပြိုင်လာသမျှကို အရှုံးပေးလို့ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းရတဲ့ ဘ၀ကိုမြတ်နိုးစေချင် မိပါတယ်။ ပုခက်လွှဲမဲ့လက်ပိုင် ရှင်များ လိမ္မာ ယဉ်ကျေးပါမှ ကမ္ဘာကြီးသာယာလှပ နိုင်မှာပါ။ မိန်းမသားများထက် ပိုပြီးမြင့်မြတ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ယောက်ျား သားများကလည်း မိမိတို့ရဲ့ ဇနီးမယား၊သားသမီးများကို သစ္စာရှိရှိ တာဝန်ဝန်သိသိနဲ့ ရိုးမြေကျပေါင်းသင်း စောင့်ရှောက်ပြီး၊ မိမိအိမ်သူမဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးများကို ညီမလေးလို တူမလေးလို ကူညီစောင့်ရှောက် သင့်တယ် မဟုတ်လား။ ဒါတွေက မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုစစ်စစ်ပါ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွား ရင်တော့ လူမျိးပါ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်ကာလအခြေအနေ အရယဉ်ကျေးမှုတွေ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲရမယ် ဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ပြောင်းလာကြတယ်။ မြန်မာမိန်းက လေးအချို့ အရက်သောက်တတ်လာပြီး၊ နိုက်ကလပ်တွေ သွားကြတယ်။ လက်မထပ်ပဲ အတူနေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ အချိန်တိကျပြီး စည်းကမ်းရှိတာတွေကိုတော့ မြန်မာတွေတော်တော် များများ ဘာလို့အတုမယူ ကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ တွေးမိတာ ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ် ကျေးမှုတွေထဲက တကယ့်အကောင်းတွေ၊ အနှစ်တွေကို လိုက်နာထိန်းသိမ်းပြီး အရမ်းရှေးဆန်လွန်းတာ တွေ အယူသည်းတာ တွေကို ပယ်ကြမယ်ပေါ့။ တိုင်းတပါးယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက ကောင်းတာတွေကို အတုယူကြမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ယဉ်ကျေးသော စည်းကမ်းရှိသော မြန်မာတွေကို ကမ္ဘာကလေးစား လာကြမှာပါ။
သီလမြဲတဲ့သူဟာ အသက်ရှည်ကျန်းမာတယ်။ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး သြဇာညောင်းတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လည်း သီလလုံတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ကြောက်စိတ်ကင်းစေပါတယ်။ ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးပေးတွေက ဒီနေ့ သီလစောင့်ရင် ဒီနေ့ရနိုင်ပါတယ်။ မယုံရင်လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါ တယ်။ အကယ်၍များ ငါးပါးသီလ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဖော်ညွန်းပါ တစ်ပါးသီလတော့ နေ့စဉ်စောင့်သင့် ပါတယ်။ သီလ တန်ခိုးနဲ့ လောကကိုအလှဆင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ပြီမို့ အိမ်ထောင်ပြုကြမယ့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ် ဖတ်ခဲ့ဖူး ကြည့်ခဲ့ဖူး တာတွေကို အတွေးပါးပါး အရေးများအဖြစ် ရေးမိတာပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကြသော ဇနီးမောင်နှံများအတွက် လည်း ငွေရတု ရွှေရတု လက်ဆောင်ပါဗျာ။
မှတ်ချက် – ရေးတော့ရေးလိုက်တာဘဲ စိတ်ဝင်စားမှ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒီပိုစ့်စတင်တုန်းက ခေါင်းစဉ်အဟောင်းပါ။ အခုခေါင်းစဉ်ပြောင်း လိုက်တာပါခင်ဗျ။
ဦးဆုံးအားပေးမန့်လာသူ သူဒေါ်ဂေါင်းအူးဗိုက်-ဘီ.အီး ရေ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
စောင့်ချင်စိတ်ရှိရင် စောင့်ပစ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ သီလကိုနော်။
ဖတ်ရင်းနဲ့ကောင်း၊ကောင်းလာတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါ…
အကျိုးကနေ အကြောင်းကို ဦးတည်ထားလို့ နှင်းနှင်းတို့ မိန်းကလေးတွေအတွက်
ငါးပါးသီလထဲမှာတိုက်ရိုက်မပါပေမယ့် လူတွေစောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေရော….
ကိုယ့်မှာ ပြည့်စုံရင် ပြည့်စုံသလောက် အကျိုးရှိပါတယ်…
ကိုယ်ကျင့်သီလကို တန်ဘိုးမထားသူတွေ မထိန်းသိမ်းသူတွေကတော့ အဲဒါကို နားလည်မယ်မဟုတ်ဘူး..
မသိသူကျော်သွား သိသူဖေါ်စား …… တဲ့
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်နဲ့တန်တာကိုယ်ရ မှာပါပဲ….
သီလမြဲတဲ့သူဟာ အသက်ရှည်ကျန်းမာတယ်။ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး သြဇာညောင်းတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လည်း သီလလုံတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ကြောက်စိတ်ကင်းစေပါတယ်။ ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးပေးတွေက ဒီနေ့ သီလစောင့်ရင် ဒီနေ့ရနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို သိလိုက် တဲ့သူဌေးကြီးဟာ သီလပျက်သစ္စာမဲ့တဲ့ ဇနီးကို နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်းပီသစွာ စောင့် ထိန်းအပ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ရဲရဲရင့်ရင့် စောင့်စည်းလိုက်တဲ့ သူခိုးကိုတော့ သူဌေးကမွေးစားလိုက် ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းမှာ အဓိကပြောချင်တာက သီလစောင့်တဲ့အတွက် သူခိုးဘ၀ကနေ သူဌေးဘ၀ရောက်ရတာ အားကျအတုယူစရာကောင်းတယ် ဆိုတာပါ။ ဒါမျိုးက ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပဲရှိတာလို့တော့ မယူဆစေချင်ဘူး။ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့ သူခိုးတောင်စောင့်နိုင်တဲ့ သီလမျိုးကို အမျိုးကောင်းသား အမျိုးသမီးကောင်းတွေလည်း စောင့်ထိန်း သင့်တယ်လို့ တွေးဆဆင်ခြင်စေချင် ပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့လည်း.. အချိုးချ.. တကယ်လုပ်ရ/မရ .. သုံးသပ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်..။
သီလတွေဟာ.. ခေတ်နဲ့ညှိသင့်ပြီလို့.. ပြောလိုရင်းပါ…။
သူ့အခွင့်အရေးပါ..။ သူဌေးမှာ.. ပိုင်ဆိုင်ငွေ တ၀က်ပဲကျန်မှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါတောင်.. .စွတ်စွဲနှင်ချတာကို.. ပြန်တရားမစွဲရင်ပေါ့..။
တရားစွဲလို့.. လူ့အခွင့်အေ၇းပါလာရင်.. ဒီထက်ပိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ကလေးများရှိခဲ့ရင်.. ကလေးစရိပ်ကလည်း.. ရှိသေး..။
.. နောက်ပြီး.. သူခိုးလည်း.. ဒီလိုကောက်ပြီးမွေးစားလို့မရပါဘူး..။ မွေးစားလို့ရတဲ့..ဥပဒေ.. အသက်အရွယ်ကရှိသေးတယ်..။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေ.. လွှဲပေးလို့မရပါဘူး..။
အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တော့.. သူဌေးက.. အလုပ်မှာ.. အလုပ်ရာထူးကြီးကြီးခန့်ဖို့ပဲ..
“အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။” သီလကိုမခံထားတဲ့.. သူခိုးပါဆိုမှတော့.. အလုပ်ခန့်ရင် ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့…
ဒီခေတ်.. ဒီအခါနဲ့.. ဒီပုံပြင်ကလေးဟာဖြင့်.. လက်တွေ့မကျပါကြောင်း..
အိမ်ထောင်ရေးတွေခိုင်မြဲအောင်.. အိမ်သူမယား/လင်ယေ်ာကျားအပေါ်.. သစ္စာရှိကြအောင်.. (ရှေးရိုးစွဲ)သီလနဲ့မဟုတ်.. ဘာသာရေးနဲ့မဟုတ်..
ခုတလော.. ကိုကြီးခင်ခစာတွေနဲ့..” ထောက်ပြော” ပြောဖြစ်နေပါတယ်..။
ဆွေးနွေးဖို့ရအောင် ..စာေ၇း.. အစဖေါ်တင်ပေးတာမို့.. ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ..။
ဖတ်သူတွေ.. “စာတလျှောက်”ဖတ်ကြည့် တွေးခေါ်နိုင်ကြပြီး. အကျိုးရှိမယ်… ထင်မိပါတယ်..။
ရှေ့က.. ဘုန်းကြီး..ဟောသမျှ.. “မှန်ပါ့ဘုရား.”. “တင်ပါ့ဘုရား” ထူးရတဲ့ခေတ်.. ကုန်စေချင်လို့ပါ..)
သဂျီးရေ့  ….
အိပ်ခါနီးမှ ငြင်းရမဲ့ ကော့မန့်တွေ့ တယ် ။ မနက်စောစောအလုပ်ပြေးရမှာမို့ သဂျီးကို
အကြွေးမှတ်ထားမယ် ။ ခုတော့ ခေါင်းတွေမူးနေပြီ….အိပ်ချင်လို့
ရှေးပုံပြင်တွေမှာ.. မိန်းမတွေကို.. ခွဲနှိမ့်ချတာ.. ပါမှန်းမသိ..ပါနေတာကို.. မြန်မာမိန်းမတွေ.. သတိတောင်မထားမိလောက်အောင်.. မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ..ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်လွန်းတယ်လို့..
အိုယာစုမိ နဆအိ.. :528:
တစ်ခြားနိုင်ငံက ရှေးပုံပြင်တွေမှာ မိန်းမတွေမှာ ဒါထက်တောင် ဆိုးသေး။
သူတို့နဲ့ ယှဉ်ပြီး ကိုယ့်မှာ သူတို့တောင် ပြန်အားနာနေရသေး။
သူကြီးရေ အဓိကဆိုလိုချင်တာက အိမ်ထောင်သည်များ မိမိအိမ်ထောင် ဇနီးသားမယား အပေါ်မှာ သစ္စာရှိစေချင်တာ ရိုးမြေကျပေါင်းစေချင် တဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးမိတာပါ။
အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲနှိမ်ချတဲ့အရေးထက် ဇနီးတွေအပေါ်မှာ တာဝန်ယူလိုစိတ် သစ္စာတရားနဲ့ ကြင်နာဖေးမ ကာကွယ်ကြဖို့ဆိုတာတွေ အလေးထားရေးထား
ကေတီဗွီ မာဆတ်နဲ့ အခြားတွေမှာ အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားတွေ အခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ သွားပြီးပျော်ပါး မြူးတူးသောက်စားနေတာတွေ၊ အငယ်အနှောင်းထား ဖောက်ပြန်တာတွေကို အမြင်ကပ်လာလို့ရေးတာဗျာ။ သူကြီးရေ သိပါပြီလား။
ပိုစ့်တွေမှာ သူကြီးကွန်မန့်တွေအတွက်လည်း တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါ၊ ကိုယ်ရေးတဲ့အရေးနဲ့ မူကွဲခဲ့ရင်လည်း အော် အဲလိုလည်းတွေးလို့ရတာဘဲ အဲလိုလည်းဖြစ်နိုင်တာဘဲလို့ ယူဆဖတ်ဖြစ်လို့ ပြန်ပြီးချေပ မမန့်ဖြစ်ပါကြောင်းပါ၊ ပြီးတော့ ငြင်းခုန်ရေးသား အချင်းများတဲ့ ကိစ္စတွေကို ခင်ခ လုပ့်လေ့မရှိတာလဲပါတာပေါ့
ကြောက်တယ်ဘဲပြောပြော အေးဆေးလေးဘဲ နေရင်းကျေနပ်သူပါ။
အမွေရပြီးရင်တောင် ဆောင်ရမဲ့ အမွေခွန်နဲ့ ဘာမှကျန်မှာမဟုတ်ဘူး…
သူဂျီး ဖက်က အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။
ဒီပုံပြင် ရှိခဲ့တာ အခုမှမဟုတ်…. ဒီပုံပြင် ကြောင့် ဖေါက်ပြန်မှုတွေ နည်းသွားသလား ဆိုရင်… အရင်အတိုင်းပဲလို့ထင်ပါတယ်။ အခုခေတ်က အရင်ခေတ်ထက် လူဦးရေပိုများလို့ အကြိမ်ပိုများပေမယ့် ရာခိုင်နှုံးကတော့ တူလောက်တယ်။
ဦးသုခ ရိုက်ပြီး မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက ပြတုံးကလည်း လူတွေကြိုက်ကြတာ အုံးအုံးကျွတ်ကျွတ်ပဲ။ လမ်းထဲမှာလဲ ဒီဇာတ်လမ်းအကြောင်း ဈေးထဲမှာလဲ ဒီဇာတ်လမ်းအကြောင်းပဲ ပြောကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက မျက်စိမမြင်ရလောက်အောင် မှုန်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဦးသုခရဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးမှု အစွမ်းကကောင်းလွန်းတော့ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီဇာတ်လမ်း တီဗီမှာပြရင် ဇာတ်လမ်းကိုသိပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် မထတမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဇတ်လမ်းက ပေးလိုတဲ့အချက်က ငါးပါးသီလမှာ တစ်ပါးလောက်လုံတာတောင် အခုဘဝမှာ ဒီလိုအကျိုးခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ယုတ္တိမရှိ၊ လက်တွေ့မဆန်၊ ယေဘုယျမကျတာက ဇတ်လမ်းဖန်တီးသူရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုပါ (ဦးသုခ မဟုတ်)။
အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်ဖို့ဆိုတာ ဖေါက်ပြန်ချင်တဲ့စိတ် နဲ့ ဖေါက်ပြန်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိရပါမယ်။ ကျန်တဲ့ သီလတွေလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီ ၂ချက်ဖြစ်တဲ့ စိတ်နဲ့အခြေအနေမှာ… အခြေအနေက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး… စိတ်ပဲကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တော့ အဲဒီစိတ်ကို ထိန်းနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ ထွင်ပြီး ပြောလာ ဟောလာကြတယ်။ ကျနော့ အမြင်ကတော့ သီလလုံဖို့ထက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိဖို့ ပဲလိုတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒီစိတ်ကပဲ ကျနော်တို့ကို ယဉ်ကျေးတဲ့လူဖြစ်စေတာပါ။ ဥပုတ်စောင့်စရာ မလိုဘူး၊ church သွားစရာမလိုဘူး၊ mosque တက်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိစေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကျနော်တို့တွေက တတ်နိုင်သလောက် ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်… လှုံ့ဆော်တာတွေ… အားပေးတာတွေပေ့ါ။
ကိုခင်ခကို အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါ၊ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဝင်ရှုပ်တာပါ။
စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်ရှုပါတယ်ခင်ဗျ ။
ည(၁)နာရီခွဲအထိဖတ်နေပါတယ် ….။ စောင့် လည်း စောင့်စည်းပါ့ မယ်ခင်ဗျ …။
ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ် ကိုခင်ခ စဉ်းစားစရာမလို လူတိုင်းလိုက်နာစောင့်ထိန်းသင့်
ဒုက္ခတွေ ရောဂါတွေ အသေဆိုးနဲ့သေတာတွေ တနေ့တခြားများပြားလာသလိုပါပဲ….
ကိုခင်ခရေ။ ဖောက်ပြန်မှုတွေကြားလိုက်ရတိုင်း စိတ်ညစ်မိပါတယ်။
တချို့ဖောက်ပြန်မှုတွေများဆို “အချစ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြသေးတယ်။
“အချစ်” ဆိုတာကိုပဲ အားနာမိပါရဲ့။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ဖတ်ရှု့အားပေး ကွန်မန့်ပြုကြသူ မနှင်းနှင်း၊ ဦးဦးပါလေရာ၊ အဘဖေါ၊ သူကြီး ၊ အရီးခင်လတ်၊ TTCG ၊ ကိုဆာမိ၊ jullies cezer နဲ့ မခိုင်ဇာဝင်း တို့ကိုကျေးဇူးပါနော်။
ဒီပိုစ့်လေးက ဘာသာရေးအယူအဆထက် လူမှု့ရေးဖောက်ပြန်မှု့ကို ဖော်ညွှန်းပြီးရေးတာပါ။
အိမ်ထောင်ရေးတွေခိုင်မြဲအောင်.. အိမ်သူမယား/လင်ယေ်ာကျားအပေါ်.. သစ္စာရှိကြအောင်..
သစ္စာရှိကြအောင်..ဥပဒေနဲ့ လုံးဝ ထိန်းလို့ ရပါ့မလား???? တွေးနေမိပါဂျောင်းးးး
သီလရှိကြပါ.. ရှိကြပါ.. ရှိတော်မူကြပါ…ရှိပေးတော်မူကြပါ ဘန္တော.. သပ္ပုရိသအပေါင်း ……… သူတော်ကောင်းတို့ ……
အော်နေရင်းပဲ.. ဒီဟာက မြန်မာ့သူဌေးတို့ရိုးရာဖြစ်လာနေပြီလေ… :harr:
ဥပဒေနဲ့..လုံးလုံး ၁၀၀ ရာနှုန်းရပ်သွားအောင်ထိန်းမရပေမယ့်.. စနစ်တကျဥပဒေတွေပြဌာန်း ကြပ်မတ်ရင်.. ပထမတနှစ်တင်.. အငယ်အနှောင်း.. အမှုတွေ.. တ၀က်လောက်ကျသွားမှာသေချာပါတယ်..။
အိမ်ထောင်တခုကို သစ္စာတရား နားလည်မှု ကိုယ်ချင်းစာတရားတို့နဲ့ပဲ မြဲအောင် ထိန်းလို့ရတယ် သူကြီး ။ ဥပဒေဆိုတာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ လူတွေ အတွက်ပဲ လိုတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယားမှာတော့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူတွေ အတွက် ဥပဒေထုတ်ထားတယ်။ တရားစွဲလို့ ရတယ် ၂ ယောက်လုံးကို ။ ( သူတို့ ရုပ်ရှင်တွေထဲ ဒီလိုပြနေကြတာပဲ )
ဆိုတော့ ဖောက်ပြန်သူတို့ အတွက်တော့ ဥပဒေ ပြစ်ဒဏ်ကြီး ကြီး ချမှာကို လိုလားတယ် ထောက်ခံတယ် နောက်တခါကျ လွှတ်တော်မှာ ဒီလို ဥပဒေကို အဆိုတင်သွင်းမဲ့ သူတွေ ပေါ်လာပါစေ
တဖက်က.. (အငယ်လေးက) “မမရယ်.. ကျမကိုလည်းကိုယ်ချင်းစာပါ”ပြောမှာပေါ့..။
ယောက်ျားက ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်ဘူး..။ မိန်းမကဆင်းရဲတဲ့ဒဏ် မခံနိုင်ဘူးတဲ့…
.. သေတ္တာပဲလိုတယ်..။.. ငွေထည့်ထားတဲ့သေတ္တာ..
ဥပဒေကသာ.. အဆုံးအဖြတ်ပေးရမှာ/ ပေးတာ.. ဖြစ်ပါကြောင်း..။
ကိုကြီးမိုက်ရေ တွေးတာလည်း သဘာဝကျပါရဲ့။ တစ်ခါတရံမှာ ယူအက်စ် နဲ့ မြန်မာ ဓလေ့စရိုက် ယဉ်ကျေးမှု့ အနေအထား မတူတာတွေလည်းရှိသမို့၊ မြန်မာများအတွက် မြန်မာဒေသအရလေးဘဲ
ညီမအရင်းလိုချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုတားလို့ မှမရဘူး….
ဟိုမှာက ကလေးတွေနဲ့ လေ….( သူမ ကတောင်အမြဲ ထောက်ပံ့နေခဲ့တာ)
သူမ ကတော့အမြဲတမ်း ကံပေါ့လေတဲ့..ဘာတဲ့..အချစ်ကံဆိုလားဘဲ..ဟိုဘက်ကမိသားစုကိုတော့ ပြိုကွဲစေအောင်
သူဘယ်တော့မှလုပ်ပါဘူးတဲ့..ဒါပေမဲ့ ဟိုဘက်က အိမ်ထောင်ရှင်မသာ သိသွားခဲ့ရင် ရင်လေးစရာ..
ကံဆိုတာ လူကဖန်တီးတာ 50 % လို့ ဆုံးမခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ပါဘူး..ခုထိ ဆက်မိုက်နေတုန်းဘဲ….ပါးစပ်နဲ့ တင်မက
ဒီလိုပိုစ့်မျိုးလေးတွေပါအမြဲပေးဖတ်ပြီး သူအမြင်မှန်ရလာအောင် ကြိုးစားနေဆဲပါ…
* အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်း ဖောက်ပြန်ခြင်းဝေးလို့ငြိမ်းအေးကြပါစေ *
SLECT * FROM tbl_Girls WHERE Martial_Status =’Single’ AND Current_BF=34 AND W=36;
IF v_Girl_Age 28()
runtime error you function needed to parameter
error occur near from Martial_Status =’Single’ Lin -1
ကောင်းလိုက်တာ လေးခင်ခရယ်။ ဒီပို့စ်လေးကိုလူအတော်များများဖတ်မိပါစေ။
အသိဥာဏ်ရှိသူတိုင်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူတိုင်း ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံချင်ကြမှာပါ။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ) လိပ်ပြာလုံဖို့လိုပါတယ်။
ပို့စ်ပါ အကြောင်းရာထက် .. ခေါင်းစဉ်ကို အားဖြည့်၊အသားပေးပြီး ကော့မန့်ပါးပါးလေးပဲ ရေးခွင့်ပြုပါနော် …. .. ။
သီလတို့ ကိုယ်ကျင့်တရားတို့က အရေးပါပါတယ် .. ဒါပေမယ့်လည်း … အရင်ဆုံး အိမ်ထောင်မပြုခင် ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ၊ ကြိုတင်လုပ်ရန်ကိစ္စ အ၀၀ ကို ကြိုတွေးပြီး ကြို လုပ်ထားကြပါလို့ပဲ … မှာချင်ပါတော့တယ် …. ။
သားဆက်ခြားဖို့ ဘာအစီစဉ်မှမရှိ ၊ ဘာကျန်းမာရေးဗဟုသုတမှ မရှိပဲ …. အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ … ဟိုလူ့လိုက်မေး .. ဒီလူ့လိုက်မေး … အနှီးဝယ်ထားပါလို့ အားပေးသူက အားပေးနဲ့ (ဟိဟိ .. ရွာထဲက ရွာသူတစ်ယောက်က သူ့အစ်မကို အဲ့လို အားပေးဖူးတယ်တဲ့ ခိခိ ) …. အဲ့လို အဖြစ်တွေ မဖြစ်အောင် ၊ အိမ်ထောင်မပြုခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ် ဆိုတာလေ ………။ ဘာမှ အစီစဉ်မရှိပဲ … ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖို့ဆိုတာ ၊ အတော်လေး ကသီလင်တနိုင်ပါလိမ့်မယ် …. ။ ဒီခေတ်မှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကာကွယ်နိုင်နေပါလျှက် ၊ မသိသေးတဲ့ လူတွေ ရှိနေပါသေးတယ် ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ၊ ကြားဖူးနားဝတော့ရှိပါတယ် ၊ ဘယ်အချိန်က စပြီး သုံးရမလဲ ဆိုတဲ့ အသိမျိုး မရှိကြဘူးလေ ။
၀ါကျွတ်တာနဲ့ … မင်္ဂလာဆောင်မယ့် လူတွေ ပြန်ဖတ်မိစေဖို့ …. သားဆက်ခြား နည်းတွေ အကြမ်းဖျဉ်းရေးထားတဲ့ ပို့စ်အဟောင်းလင့်လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ထိုးဆေးတွေကို ပထမဆုံး စထိုးမယ်ဆိုလျှင် အိမ်ထောင်မပြုခင် တပတ်လောက်က စထိုးသင့်ပါတယ်ဆိုတာလေး … တလက်စတည်း မှာလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။
အဟမ်း အဟမ်း !!
အေ့လေ ဘူ့လိုက်မေးနေစရာလိုလဲ ခုဆိုကော်ပီကူးပီး ဖော်ဝပ်ပလိုက်တာပေါ့
ခိခိ ……..အားပေးတတ်သူ …. ချာတူးလေးးးးးး ချစ်ချာကောင်းတဲ့ ချာတူးလေးးးးးးး အာပွား …. ခွိခွိ သူ့အတင်း လာပြောတော့မှပဲ … သူနဲ့ တန်းတိုးတာပဲ …….. ။
ကိုခင်ခရေ ဖတ်ပြီး မှတ်သားသွားပါကြောင်း…
အော် သကြီး သကြီး မော်ဒန်အမြင့်ကားတွေ ပဲ ကြည့်တတ်ပါလားနော်……… ဟင်းးးးးးးးးးးးးးး
မော်ဒယ်အမြင့်ကားဒွေပဲ ကြည့်သူကို လေဆိပ်မှာ နွားလှည်းနဲ့ အိုးစည်ဗုံမောင်းနဲ့ သွားကြိုရင်ကောင်းမလား :bar:
စိတ်တွေ အမျိုးမျိုး ရှိတြ့ အနက်…ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးစိတ် က လူစိတ်ပါတဲ့ 
ဖောက်ပြန်မှု ဆိုတာကတော့ ………….စောင့်ထိမ်းသင့်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့
အိမ်ထောင်မရှိ ပြုဖို့အစီအစဉ်လည်း မရှိဘူးဆိုတော့ ကျော်သွားပါတယ်
နောက်တာပါ ဦးဦးခင်ခရေ …
ဒီပို့စ်အတွက် လက်မအကြီးကြီးထောင်ပါတယ်ဗျို့ …
Moe Z ရေ တစ်ယောက်တည်းနေတာက ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန် ကိစ္စမရှိပေမယ် အသက်ကြီးလို့ အိုမင်းတဲ့ အခါမှ လိုချင်လို့နှောင်းတမြေ့မြေ့ ဖြစ်မယ်နော်။ လက်မအကြီးကြီးထောင် အားပေးမန့်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါ၏။
အိမ်ထောင် ရှိသည့်သူများ.ဆ.ိုတဲ့စာသားအောက်မှာပါ…. မပါဝင်သေးတဲ့ 
ကလေးငယ် တစ်ယောက်ပါ ။
စပ်စုတဲ့ ကလေးမို့ …
ဒီရက် မှာ အမေရိကန် သမ္မတ မဲဆွယ်သတင်းတွေ ထဲ က ထိုးထွက်ပြီး ကြားလိုက်ရတဲ့ Ann Coulter ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး အကြောင်း။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့က သူကြီး ရဲ့
“ရှေးပုံပြင်တွေမှာ.. မိန်းမတွေကို.. ခွဲနှိမ့်ချတာ.. ပါမှန်းမသိ..ပါနေတာကို.. မြန်မာမိန်းမတွေ.. သတိတောင်မထားမိလောက်အောင်.. မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ..ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်လွန်းတယ်” ဆိုတဲ့စကားလေး။
သူကြီးကတော့ အရိပ်တွေ့လိုက်တာနဲ့ အကောင်ကို သိရောပေါ့။
အဲဒီ Ann Coulter ဆိုတာ Republican ပါတီ ရဲ့ Romney ဘက်က မဲဆွယ်ပေးနေတဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ် စစ်စစ် lawyer တစ်ယောက်ပါ။
သူလွန်လွန်ကျူးကျူး ပြောတဲ့ တစ်ခြားအကြောင်းတွေ တော့ မပြောတော့ပါဘူး။
အဲဒီအထဲက ရင်ထဲထိသွားတဲ့ အကြောင်းက
“မိန်းမ တွေ ရဲ့ မဲပေးခွင့် ကို ပြန်ရုတ်သိမ်း သင့်သတဲ့။ အသိဉာဏ် မပြည့်ဝ မှုကြောင့် ဒီမိုကရက်ကို မဲပေးကြတာများ လို့ တဲ့။”
လူ့အခွင့်အရေး တွေ ထိပ်တန်းတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကြီး မှာ နေတဲ့ မိန်းမ ကတောင်မှ ဒီလို မိန်းမတွေ ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ “အမျိုးသမီး တွေ ရှေ့ထွက်” လို့ ဆိုနေကြပါပြီ ဆိုတာလေး စကားပါးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကမ္ဘာမှာ မိန်းမချင်း ယှဉ်ရရင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ရှေ့တန်းကနေနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
ကျွန်မတို့ ရဲ့ အခွင့်အရေး တွေ ကို ယောကျာင်္းတွေ နောက်မှာ ကွယ်ပြီး မထားကြပါနဲ့။
interview with New York Observer 2007-10-02, quoted in “Coulter:
အိမ်ထောင်ဖောက်ပြားမှု မရှိအောင်ကတော့ အဖက်ဖက် က များစွာသော အချက်အလက်များ လိုပါတယ်။
ကိုသစ်စကား ကို ယူ သုံးရရင်တော့ မပြတ်သော အသိ၊ သတိ Awareness လေးလိုပါကြောင်း။
လေးလေးရေ… အိမ်ထောင်ရှိသူလည်းမဟုတ်သလို အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူလည်း မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်သီလအကြောင်းရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးကို လက်မထောင်ပြီး ဖတ်သွား၊ မှတ်သွားပါတယ်…
မြန်မာအမျိုးသမီးပီပီ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုပဲ သဘောကျမိပါတယ်… ကိုယ့်ချစ်သူက တစ်ခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ထပ်ကြိုက်ရင်တောင် တော်တော်လေးခံစားကြရတာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းက အပြင်မှာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်ပြီး ပျော်ပါးနေတယ်ဆိုရင် ဇနီးမယားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ပဲ ဆိုဆို သမီးအမြင်ပြောရရင်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြက်ပြီးတော်နေပါစေ.. ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းအပေါ် ယုံကြည်အားကိုးမှု၊ မိခင်စိတ်နဲ့ ချစ်ခင်မှုဆိုတာတွေဟာ အဲ့ဒီဇနီးရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေမှာပါ။
ဒီတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ အပြင်မှာ ပျော်ပါးတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မိန်းမရဲ့ရင်ကို နည်းနည်းတော့ စာနာစိတ်မွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်…
လေးလေးရေ… ပြောင်းပြန်ပြောကြည့်ရရင် ယောက်ျားလေးတွေက အပျိုစစ်တဲ့မိန်းကလေး ရှားပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်း လူပျိုစစ်တဲ့ယောက်ျားလေး မရှိသလောက်ပါပဲလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘက်ကတော့ ပြောကြပါရဲ့..ယောက်ျားလေးဆိုတာ အရှုံးမရှိဘူးတဲ့… ဘာမှနစ်နာမသွားပါဘူးတဲ့… ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျ အဲဒီစကားနဲ့ကာကွယ်ပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြပါရဲ့..သူတို့မာယာထဲမှာ နစ်မျောပြီး သူ့တို့ကိုချစ်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို မေ့သွားမိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုတော့ လက်ညှိုးထိုးနေကြရဲ့..
လေးလေးရေ..ပြောရင်းနဲ့ လမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီလားမသိဘူး… သမီးလည်း အဲဒီ့တစ်ပါးသီလ ဇာတ်လမ်းလေးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်..မှတ်မိသလောက် မင်းသားဇော်လင်းနဲ့ မင်းသမီး ခင်စိုးပိုင်ထင်ပါတယ်… အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်းသာမက လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်ကျင့်သီလ စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ…
သမီးကတော့လေ ယောက်ျားများယူဖြစ်လို့ကတော့ သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်… သမီးသူငယ်ချင်းတွေက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျထားပြီး ရွယ်တူဆိုတော့ ဘက်ညီတယ်…ယောက်ျား ဂိမ်းဆိုင်သွားရင် သူလည်းလိုက်ပြီး ဒိုတာခုတ်တယ်… ဘီယာဆိုင်သွားလည်း လိုက်ထိုင်တယ်.. မာဆတ်သွားမလား.. အဖော်လိုက်ပေးတယ်… ယောက်ျားနဲ့အပြိုင်ပဲ..ဟီး.. သမီးကျရင်လည်း အဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့…
မွန်မွန်ရေ ဘက်ညီသော အိမ်ထောင်သည်တိုင်းမှာ အပျော်လေးတွေနဲ့ ဖေးမကူညီမှု့တွေဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သံယောဇဉ်ကို ပိုပြီးခိုင်မြဲစေသလို နားလည်ယုံကြည်မှု့ကိုလည်း ရတတ်တယ်လေ။
ခင်ခ နဲ့ မဒမ်ခင်ခ လည်းအဲလိုဘဲ ဆိုရလိမ့်မယ်၊ ခင်ခ တစ်ယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ အရက် ဘီယာ မသောက်ဘူးလေ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖော်မရှိရင် မဒမ်နဲ့ နှစ်ယောက်သွားသောက်လို့ပါဘဲ၊
သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ သွားလာတာကလွဲပြီး အပြင်ဆိုနှစ်ယောက်တူသွားကြတာများ တယ်လေ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်နာရီထက်ပိုပြီး စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခြင်း မပြုကြကြေးဆိုတဲ့ သဘောတူမှု့လေးကို လက်ထပ်ချိန်ကစလို့ ခုထိလိုက်နာနေတုန်းမို့ ခင်ခ အတွက်တော့ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းသည် ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ကောင်းပါသည်လို့ ဆိုလို့ရတယ် သမီးရေ။
ဟိုရွာအပြင်ဇနပုဒ်တဲလေး ဆီးမီးမှိန်တုတ်မှောင်ရီ အတူနေရင် ကြယ်မြင်လမြင် နှစ်ယောက်တည်း တိုင်းပြည်ဘဲဗျာ။
သူတစ်ပါး ဥစ္စာပစ္စည်းခိုးယူခြင်း နဲ့ 
သူတစ်ပါး အသက်ကိုသတ်ခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း
အခုချိန်ထိ မချိုးဖောက်ခဲ့ဖူးဘူးဗျို့ 
ဖတ်ပြီးသွားမှ စိတ်ဝင်စားမှဖတ်ကြည့်ပါဆိုတော့ သမီးက ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့ …
ပြန်နှုတ်တဲ့အနေနဲ့ နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီး ပြန်ချေလိုက်ရမှာလား